असार ७ गते सूर्य ग्रहण लाग्दै, कुन राशिका लागि कस्तो ? - Nepal Tale - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
असार ७ गते सूर्य ग्रहण लाग्दै, कुन राशिका लागि कस्तो ?
प्रकाशित मिति : 2020-06-15
२०७७ सालको पहिलो सूर्य ग्रहण असार ७ गते आइतबार लाग्दैछ। नेपालमा बिहान १० बजेर ५५ मिनेटबाट सुरु हुने सूर्यग्रहण अपरान्ह दुई बजेर २४ मिनेटमा समाप्त हुने छ।
मध्याह्न १२ बजेर ४१ मिनेट जाँदा काठमाडौँबाट सूर्य करिब ८८ प्रतिशत ढाकिएको देख्न सकिनेछ। उक्त समयमा वातावरणीय तापक्रम घटेर चिसो अनुभव हुने छ।
यो ग्रहणको अवधि ३ घण्टा ३१ मिनेटको हुनेछ। खण्डग्रास सुर्यग्रहण २ नक्षत्रलाई समेटेर लाग्दैछ। मिथुन राशिमा लाग्ने कारणले यस्लाई विशेष रुपमा हेरिएको छ।
यदि धर्मशास्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने यो सूर्यग्रहण मेषराशि, सिंहराशि, कन्याराशि तथा मकर राशीभएका मानिसले मात्र हेर्न हुन्छ। तथापी वैज्ञानीकहरू भने सूर्यग्रहण जो कोहिले सुरक्षित तरिका अपनाएर हेर्न हुने मान्दछन्।
मोबाईलबाटै उत्कृष्ट क्वालिटीमा फोटो खिच्न सकिन्छ ?
हत्या अभियोगमा २७ वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष प्रमाणित